परीक्षा Archives - Lokpati.com
Tag - परीक्षा
काठमाडौं। कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) यस वर्ष कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा गृहकार्य सुरु भएको छ।...
माघ १८ देखि त्रिविका स्नातक तहका परीक्षा हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले स्नातक तहको २०७७ सालमा नियमित रुपमा हुने परीक्षा माघमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।
एक सूचना जारी गर्दै त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले २०७७ माघ १८ गते देखि विभिन्न संकायका...
विज्ञान-प्रविधि • शिक्षा
मेसिनबाटै उत्तरपुस्तिका जाँच्ने शिक्षक सेवा आयोगको निर्णय
काठमाडौं। शिक्षक सेवा आयोगले वस्तुगत खण्डको उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम मेसिनबाट गर्ने भएको छ। अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षाबाट आयोगले पहिलोपटक अप्टिकल मार्क रिडर (ओएमआर) मेसिनको प्रयोग गर्ने भएको हो।
कात्तिकमा जापान जाने कामदारका लागि भाषा र सीप परीक्षा
काठमाडौं, ६ साउन। जापान जाने नेपाली कामदारका लागि कात्तिक ११ र १२ मा भाषा परीक्षा हुने भएको छ।
जापान सरकारसँग भएको सम्झौताअुनसार पहिलो चरणमा कियर गिभरका लागि लैजान भाषा परीक्षाको तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा...
९ अङ्क प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई ६९ अङ्क बनाएको त्रिविद्वारा स्वीकार
काठमाडौं, १८ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले नौ अङ्क प्राप्त गरेका परीक्षार्थीलाई ६९ अङ्क बनाइएको स्वीकार गरेका छन्।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मंगलबार त्रिविका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको...
लोकसेवा : कसरी लिइन्छ परीक्षा, कसरी जाँचिन्छ उत्तरपुस्तिका ?
प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो। यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने...
बुधबार लाेक सेवाकाे परीक्षा खुल्ने
काठमाडौं, १४ जेठ। सात प्रदेशमा १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पठाएको छ।
पाँच सय ५५ स्थानीय तहबाट माग भएका कर्मचारीको संख्या मन्त्रालयले लोकसेवालाई...
लोकसेवा पास गर्ने ‘सेभेन ए’ र ‘सेभेन सी’ सुत्र
कन्टेन्ट: कन्टेन्ट भनेको पाठ्क्रम हो। पाठ्यक्रममा के–के विषयवस्तु पढ्नुपर्छ...